होमपेज / कला / बलीवुड / मुन्नाभाइ कैदी नम्बर १६६५६
मुन्नाभाइ कैदी नम्बर १६६५६	23 May 2013 | 13:06pm बिहीबार ९ जेष्ठ, २०७०
मुम्बई- आउँदो ४२ महिनासम्म बलिउड हिरो सञ्जय दत्तलाई कैदी नम्बर १६६५६ का रुपमा चिनिनेछ। पुनेको यारवादा जेलमा उनलाई दिइएको कैदी नम्बर यही हो। ५३ वर्षका हिरोलाई मुम्बईबाट पुनेको जेल लगिएको हो। उनलाई जेलमा वेग्लै कोठामा राखिएको छ। उनलाई अण्डा सेलमा राख्नेल हल्ला भएपनि राखिएको छैन। अण्डा आकारको कैदी राख्ने घरलाई अण्डा सेल भनिएको हो।
सन् १९९३ मा मुम्बई हमलामा हतियार राखेको मुद्दामा दोषी देखिएपछि उनलाई जेल हालिएको हो। बलिउडका मुन्नाभाइले फिल्ममा धेरैपटक कैदीको पोशाक लगाएका छन्। तर, यसपाला उनले कैदीकै पोशाकमा ४२ महिना पूरा कटाउनुपर्नेछ।बलिउडमा एउटा फिल्ममा करोडौं लिने सञ्जयले जेलमा परिवारबाट मासिक १५ सय रुपियाँ पाउनेछन् जुन क्यान्टिनका लागि उपयोग हुन्छ। उनले महिनामा एकजना आफन्तसँग २० मिनेट कुराकानी गर्न पाउनेछन्। « कान्समा पापराजी सामु सर्लिन चोपडा
सलमानकी नयाँ प्रेमिका लुलिया! (तस्बिरहरुसहित) »
सञ्जय जेलभित्र, मान्यता फिल्म प्रवर्द्धनमा जेल गए मुन्नाभाई! सर्वोच्चद्वारा सञ्जय दत्तको निवेदन अस्वीकार, जेल जानै पर्ने सञ्जय दत्तले ६ महिना मागे सञ्जय दत्तले माफी अपील नगर्ने प्रतिक्रिया